Tag: Nnukwu ego | Martech Zone
Monday, June 13, 2016 Saturday, January 9, 2021 Douglas Karr
Mgbe m na-arụ ọrụ n’ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ, imepụta ngwa ngwa bụ ihe ewu ewu. Akụkụ nke ekele ahụ bụ na ị ga-ebelata ego ejikọtara na ngwaahịa na nchekwa, ma na-agbasi mbọ ike iji kwadebe maka ọchịchọ. Data bụ akụkụ dị mkpa, na-ekwusi ike na anyị agaghị agabiga ngwa ahịa anyị chọrọ mgbe anyị nwere ike ịgbanwe ma zute ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Dika data data ndi ahia bara uba karia
Usoro B2B gị kwesịrị ịgụnye Ecommerce
Monday, November 2, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
You maara na anyị etinyela ụlọ ahịa ọrụ na Martech? Anyị anaghị akwalite ya otu ụda (mana) ka anyị na-aga n'ihu, mana anyị na-ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọ ọnụahịa ọnụahịa ma achọghị ịrụ ọrụ na ndị otu ahịa ka ha debanye aha maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ọ bụ ya mere anyị ji wuo akụkụ a nke saịtị anyị ma anyị na-agbakwunye ngwaahịa na ọrụ - site na
Enwere ezigbo ego na-arụ ọrụ na ndị mmepe ngwa ngwa ngwa ngwa naanị na atụmatụ na prototyping. Oge ejiri hụ na ahụmịhe onye ọrụ bụ ezigbo dị oke mkpa maka ọganiihu nke nnabata na iji ngwa mkpanaka gị, n'agbanyeghị. Mana naanị 52% na-eji usoro nnwale maka ngwa mkpanaka ha dịka otu akụkọ sitere na Accenture! [igbe ụdị = ”nbudata” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”] Jiri anyị Mgbakwunye njikọ wee ruo 30% anya gị Proto.io
Tọzdee, Eprel 2, 2015 Douglas Karr
Nhazi onwe, ọdịnaya di ike, ntughari, nsuso IP all anyị niile maara na ndị ahịa na-enwe ekele ma zaghachi nke ọma na ozi na ahaziri nkeonwe, mana ndị na-ere ahịa nwere ike ịgafe oke? Accenture weputara nsonaazụ nke nyocha ha mere nke kwuru EE. Nnyocha Nnyocha Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ahịa Nnyocha Nnyocha Ahụhụ nke Accenture nyochare atụmanya ndị ahịa na ahụmịhe ịzụ ahịa nkeonwe ma chọpụta ụdị teknụzụ mkpọsa, ahaziri ndị ahịa na nkwukọrịta - ịntanetị na ụlọ ahịa - ndị ahịa nwere ike ịnweta. Nhazi nke Onwe